ဘာကြောင့် ကျွန်မမှ နာကျင်ရတာလဲ … – Shinyoon
ဘာကြောင့် ကျွန်မမှ နာကျင်ရတာလဲ …
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးကိုမှ လိမ်ညာရက်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်တွေမတင်ချင်တော့ပါဘူး အဆုံးသတ်တွေ မကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ ဘာကြောင့် ကျွန်မကိုမှ ရွေးခဲ့တာလဲ ရှင်သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူ ရှင့်အနားမှာ ရှိနေပြီပဲလေ လုံလောက်ပြီပေါ့ ။ ဘာကြောင့် မချစ်တတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို ချစ်တတ်အောင် သင်ပေးပြီး နာကျင်စေခဲ့တာလဲ ဆိုတာတော့ သိချင်မိသေးတယ် ။
တချို့က ပြောကြတာ ကျွန်မက ကြားလူ .. လူနှစ်ယောက်အဆင်ပြေနေတာကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့သူတဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ သူ ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းခဲ့တာပါ … လိမ်ညာနေမှန်းမသိအောင်ထိ ပိရိလွန်းခဲ့တာ တကယ်ဆို ကျွန်မကလေ ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားလူကို ပိုင်လုနေဖို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဆီက လာလုရင်တောင် အသာတကြည်နဲ့ ပေးလိုက်မယ့်လူမျိုး ယှဉ်လုရတာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို ပြိုင်လုနေရတဲ့အထိ မာနတွေ မမဲ့ခဲ့သေးဘူး …
တစ်ခုခုဆို … ကိုယ်က အနေအထိုင်မတတ်လို့ဆိုပြီး အပြစ်တင်ချင်ကြတယ် … ကျွန်မကို လာပြီး ချစ်ပါ ရှင်မချစ်ရင် ကျွန်မ သေရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မမြူစွယ်ခဲ့ဘူး မာယာဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိခဲ့ဘူးလေ … တစ်ခုပဲ မေးချင်တယ် ဆိုင်သူရှိထားပြီးပြီပဲ ဘာကြောင့် ကျွန်မကို ဒီသတ်ကွင်းထဲ ခေါ်ရတာလဲ ဘာကြောင့် ကျွန်မကိုမှ ရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲ
ဇာတ်သိမ်းကြရင် ရှင်တို့နှစ်ယောက် က ပျော်ရွှင်စွာဇာတ်သိမ်းကြလေသတည်းဆိုပြီး ပျော်ရမှာ ကျွန်မကတော့ ချစ်ရဲတဲ့ နှလုံးသားဟာလဲ သေရတယ် တစ်စုံတစ်ယောက် ကိုယ့်အနား ဖြူဖြူစင်စင်လေး လာရပ်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးရင်တောင် လိမ်ညာနေတာပါဆိုပြီး မယုံရဲတွေဖြစ်ရတယ် … ရှင့်အတွက် အပျော်ဆိုပေမယ့် ကျွန်မ အတွက်တော့ တစ်ဘဝစာ အမည်းစက်တွေပါပဲ …
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကိုပဲချစ်ပါဆိုပြီး တောင်းပန်ရလောက်တဲ့အထိ သိက္ခာတွေ မမဲ့ခဲ့သေးဘူး သုံးပွင့်ဆိုင်လာတဲ့အခါ ကျွန်မဘက်က ဦးအောင် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် … ဝဋ်ကြွေးရှိလို့ပဲ ကျွန်မ နာကျင်ရတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ် ပြီးတော့ ကိုယ်ညံ့ခဲ့လို့ ကိုယ် အလိမ်ခံရတယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်နေမိတယ် .
ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္မမွ နာက်င္ရတာလဲ …
သိပ္ခ်စ္တတ္တဲ့ ေကာင္မေလးကိုမွ လိမ္ညာရက္တယ္ဆုိျပီး အျပစ္ေတြမတင္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး အဆံုးသတ္ေတြ မေကာင္းတဲ့ဇာတ္လမ္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္မကိုမွ ေရြးခဲ့တာလဲ ရွင္သိပ္ခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူ ရွင့္အနားမွာ ရွိေနျပီပဲေလ လံုေလာက္ျပီေပါ့ ။ ဘာေၾကာင့္ မခ်စ္တတ္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္မကို ခ်စ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးျပီး နာက်င္ေစခဲ့တာလဲ ဆုိတာေတာ့ သိခ်င္မိေသးတယ္ ။
တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတာ ကြ်န္မက ၾကားလူ .. လူနွစ္ေယာက္အဆင္ေျပေနတာကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္တဲ့သူတဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းခဲ့တာပါ … လိမ္ညာေနမွန္းမသိေအာင္ထိ ပိရိလြန္းခဲ့တာ တကယ္ဆို ကြ်န္မကေလ ပိုင္ရွင္ရွိျပီးသားလူကို ပိုင္လုေနဖို့မေျပာနဲ႔ ကိုယ့္ဆီက လာလုရင္ေတာင္ အသာတၾကည္နဲ႔ ေပးလုိက္မယ့္လူမ်ိဳး ယွဥ္လုရတာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကုိ ျပိဳင္လုေနရတဲ့အထိ မာနေတြ မမဲ့ခဲ့ေသးဘူး …
တစ္ခုခုဆုိ … ကိုယ္က အေနအထိုင္မတတ္လုိ့ဆိုျပီး အျပစ္တင္ခ်င္ၾကတယ္ … ကြ်န္မကို လာျပီး ခ်စ္ပါ ရွင္မခ်စ္ရင္ ကြ်န္မ ေသရပါလိမ့္မယ္ဆုိျပီး ဘယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မျမဴစြယ္ခဲ့ဘူး မာယာဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္ မသိခဲ့ဘူးေလ … တစ္ခုပဲ ေမးခ်င္တယ္ ဆိုင္သူရွိထားျပီးျပီပဲ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္မကို ဒီသတ္ကြင္းထဲ ေခၚရတာလဲ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္မကိုမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတာလဲ
ဇာတ္သိမ္းၾကရင္ ရွင္တို့ႏွစ္ေယာက္ က ေပ်ာ္ရႊင္စြာဇာတ္သိမ္းၾကေလသတည္းဆိုျပီး ေပ်ာ္ရမွာ ကြ်န္မကေတာ့ ခ်စ္ရဲတဲ့ နွလံုးသားဟာလဲ ေသရတယ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကိုယ့္အနား ျဖဴျဖဴစင္စင္ေလး လာရပ္ျပီး ဂရုစိုက္ေပးရင္ေတာင္ လိမ္ညာေနတာပါဆုိျပီး မယံုရဲေတြျဖစ္ရတယ္ … ရွင့္အတြက္ အေပ်ာ္ဆိုေပမယ့္ ကြ်န္မ အတြက္ေတာ့ တစ္ဘ၀စာ အမည္းစက္ေတြပါပဲ …
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မကိုုပဲခ်စ္ပါဆိုျပီး ေတာင္းပန္ရေလာက္တဲ့အထိ သိကၡာေတြ မမဲ့ခဲ့ေသးဘူး သံုးပြင့္ဆုိင္လာတဲ့အခါ ကြ်န္မဘက္က ဦးေအာင္ နွုတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္ … ၀ဋ္ေၾကြးရွိလုိ့ပဲ ကြ်န္မ နာက်င္ရတယ္လုိ့ပဲ မွတ္ပါတယ္ ျပီးေတာ့ ကိုယ္ညံ့ခဲ့လုိ့ ကိုယ္ အလိမ္ခံရတယ္လုိ့ပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ေနမိတယ္ .
သူ့ကို ချစ်လို့သာ ကျွန်တော် မဆက်သွယ်ပဲ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာပါ ။
အရမ်းလွမ်းတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူး ….